सस्तो मूल्यमै गुणस्तरीय सेवा दिने डिसहोमको इन्टरनेटः कहाँ
काठमाडौं । करिब डेढ वर्षअघि केबलसँगै इन्टरनेटमा हात हालेको डिसहोमले यतिबेला आक्रामकरुपमा बजार बिस्तार गरिरहेको छ । डेढ वर्षको अवधिमा ५० हजारभन्दा बढी डिसहोम फाइभर नेटका ग्राहक बनाइसकेको कम्पनीले आगामी
‘भित्रि कारोबार’ गर्दा अमेरिकामा गुप्तालाई डेढ अर्ब जरिवाना र जेल, ढुंगानालाई के होला ?
काठमाडौं । एक सिमेन्ट कम्पनीको सेयरमा भित्रि कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) गरेको आरोपमा पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष भीष्मराज ढुंगानालाई सरकारले हालैमात्र पदबाट बर्खास्त गर्यो । अर्थमन्त्रालयले गठन गरेको
कस्ले किन्ला इच्छाराज तामाङको सिभिल बैंकमा रहेको साढे ३१ लाख कित्ता सेयर ?
काठमाडौं । चर्चित घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङलाई प्रहरीले ठगी आरोपमा असोज १८ गते पक्राउ गर्यो । यो घटनासँगै व्यवसायी तामाङको डाउनफल औपचारिकरुपमा शुरु भएको छ । रुसबाट सिभिल इन्जिनियरको अध्ययन
काठमाडौं । कुनै पनि घर निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि हामीले बजेट छुट्टयाउनु सबैभन्दा पहिलो काम हो । बजेट अनुसार नै कस्तो घर बनाउने भन्ने निर्णय हुन्छ । घर निर्माण गर्नुभन्दा अगाडि
भैंसेपाटीमा बन्दै गरेको सिजी भिल्लाको बुकिङ खुला, मूल्य १० करोडसम्म
काठमाडौं । चौधरी ग्रुपको लगानी रहेको ललितपुरको भैंसेपाटीमा निर्माणधिन सिजी भिल्लाको औपचारिक बुकिङ आजदेखि खुल्ला भएको छ । सिजीले सिजी हिल्स प्रिमियमले दशैंतिहार, छठलक्षित भिल्लाको आजबाट औपचारिक रुपमा बुकिङ खुल्ला
काठमाडौं । भदौ महिनामा बैंकहरुले पठाउने गरेको निक्षेप र कर्जाको विवरण हेरेपछि राष्ट्र बैंकका नियमन र सुपरिवेक्षणका अधिकारीहरु झस्के । साउन र भदौ महिनामा भएको उच्च आयात तथा रेमिटेन्स नबढेको
काठमाडौं । २०४६ सालको राजनीतिक परिवतर्नपछि नेपालमा बैदेशिक लगानीमा उद्योगहरु खुल्ने क्रम अघिबढ्यो । त्यहीबेला बेलायतको बहुराष्ट्रिय कम्पनी युनिलिभर नेपालमा लगानी गर्न आउने भयो । बेलायतको हिन्दुस्थान युनिलिभरको नाममा भारतीय
काठमाडौं । डाटा अर्थात् तथ्यांक । तथ्यांक आँकडा मात्रै होइन । यो विश्वास पनि हो । कुनै विषयमा पुष्टि गर्ने आधार पनि हो । व्यवसायलगायत हरेक पक्षको विश्वस्नीयताको आधार हो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई अर्घाखाँची सिमेन्टले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ देखि २०७५/७६ सम्म ९४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ महशुल बुझाएको छ । प्राधिकरणलाई बढी महशुल बुझाउने ठूलो औद्योगिक ग्राहकहरुमा अर्घाखाँची
काठमाडौं । सफलता र असफलता व्यावसायिक जीवनका नछुट्टिने पाटा हुन् । सफलताको सम्भावना र असफलताको जोखिमका बीच शुरु गरिने व्यावसायिक यात्रामा कहिले कहाँ पुगिन्छ टुंगो हुँदैन । तर, सफलता र
काठमाडौं । शनिबारदेखि पानी पर्ने प्रक्षेपण जल तथा मौसम विज्ञान विभागले गरेको छ । विभागको